Miadam-Pandeha Ny Fiarahamonim-pirenena Amin’ny Fanadihadiana Ny Filazana Fitondran-tena Ratsy Nataon’ny Filohan’i Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2016 17:17 GMT
Rhoda Bharath sy ny mpisolovava Justin Phelps nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 27 Oktobra tao Port of Spain. (Pikantsary avy amin'ny lahatsary Facebook Live)
Tamin'ny 27 Oktobra 2016, iray volana monja taorian'ireo andiam-panontanian'i Rhoda Bharath, mpampianatra iray eny amin'ny oniversite, tamin'ny filohan'i Trinidad sy Tobago tao amin'ny Facebook Live mikasika ny fiampangana fanodikonam-bola sy fitondran-tena ratsy ao amin'ny biraom-panjakana, nanatontosa valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao Port of Spain izy. Nalefa mivantana tao amin'ny Facebook Live koa ny zava-nitranga (valan-dresaka ho an'ny mlpanao gazety).
Tamin'ny fanambarany ho an'ny haino aman-jery, nifantohan'i i Bharath manokana ny raharaha fanomezana tambin-karama amin'ny trano fonenana mitentina TT $ 28.000 (eo ho eo amin'ny 4.180 dolara Amerikana) isam-bolana izay noraisin'ny filoha Antony Carmona nanomboka tamin'ny Jolay 2013 hatramin'ny May 2015 sady nonina tamin'ny tranom-panjakana. Nanazava izy fa nangataka tamin'ny mpisolovavany, Justin Phelps mba hitady torohevitra amin'ny mpisolovava zokiolona ao Angletera mikasika ny antontan-taratasy teny aminy, mba hamaritana raha nisy ny antony ho an'ny famotorana heloka bevava mikasika ny tsy fahaiza-mitondra tena tao amin'ny biraom-panjakana, eo amin'ny filoha, ny sekreterany tamin'izany ary koa ny lehiben'ny mpiasa ambony (CPO).
Nanoro-hevitra an'i Bharath ny mpisolovava avy ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, Cathryn Mc Gahey QC, izay manana traikefa lehibe amin'ny fandinihana ny olana ara-pitsarana amin'ny politikam-panjakana fa azo atao ny fangatahana famotorana tahaka izany. Nilaza tamin'i Bharath i McGahey fa “Voalanjalanja tsara ny raharaha saingy mino aho fa misy ankehitriny ny antony mitombina iahiahiana fa nisy tokoa ny tsy fahaiza-mitondra tena ao amin'ny biraom-panjakana.”
Nitatitra ny raharaha tamin'i Harold Phillips, kaomiseran'ny polisy tompon'andraikitra tamin'izany i Bharath, saingy mbola miandry valiny avy amin'i Phillips, na avy amin'i Stephen Williams, mpisolo azy. Tamin'ny 11 Novambra 2016, nandefa taratasy fanaraha-maso amin'ny anaran'i Bharath tany amin'ny Kaomisera ny mpisolovava Justin Phelps.
Manamarika ny fisian'izany voalohany teo amin'ny tantaran'i Trinidad sy Tobago sy—araka ny filazan'i Bharath—teo amin'ny Commonwealth manontolo koa izany tranga izany, izay nangataka ny olom-pirenena mba hanaovana fanadihadiana ny olona mitàna toeram-panjakana ambony tahaka izany. Nanazava tsara ihany koa i Bharath fa ny taratasiny ho an'ny polisy dia tsy milaza fa meloka amin'ny fandikan-dalàna ny olona voatonona ao, saingy mino izy fa ampy ny porofo hitakiana fanadihadiana.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Phelps fa, tsy hoe mitsabaka amin'ny asan'ny polisy, nisy ny porofo fanampiny izay azo aseho amin'ny fotoanany. Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nilaza izy fa (tahaka ny taloha) ny zavatra antenainy amin'ny vokatry ny raharaha. “Mifototra amin'ny tantara efa nisy hatrany …,” hoy izy. “Tsy maintsy miandry isika ary hahita.”
Milaza ny tari-dalana momba ny Lalànan'ny Asam-panjakana ao amin'ny firenena fa izay manampahefana tsy nahazo trano fonenana avy amin'ny fanjakana dia manan-jo hahazo tambin-karama manokana amin'ny trano fonenana. Tamin'ny fanambarana ampahibemaso tamin'ny 28 Septambra 2016, nanizingizina ny Filoha Carmona fa tsy mitovy ny an'ny filoham-pirenena ny tari-dalàna, nilaza izy fa ny didin'ny SRC dia manambara fa nanan-jo hahazo 28.000 dolara isam-bolana izy satria ny trano fonenana novatsian'ny fanjakana vola izay nipetrahany dia tsy dia tsara.
Tsy zava-baovao ny resaka tambin-karama amin'ny trano fonenana. Ny fitaovana nomena ny haino aman-jery nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notanterahan'i Bharath dia nahitàna kopian'ny taratasy tamin'ny Jolay 2013 avy amin'ny Biraon'ny Lehibe Misahana ny mpiasa (CPO) ho an'ny sekretaran'ny Filoha Carmona, nilaza ny taratasy fa “araka ny fitsipika, raha nomen'ny fanjakana trano fonenana ny mpiasa birao, dia tsy aloa intsony mandritra ny fotoana nanomezana azy ny trano fonenana ny tambin-karama amin'ny trano fonenana.” Tao anatin'izany taratasy izany ihany, nankatoavin'ny CPO ny tambin-karama amin'ny trano fonenana izay mitentina TT $ 15,450 (manodidina ny 2.305 dolara Amerikana) “mandritra ny fe-potoana hipetrahan'ny [filoha] amin'izany trano fonenana vonjimaika izany ihany”. Nitombo ny tarehimarika tatỳ aoriana ka tafakatra 28.000 dolara isam-bolana.
Pikantsarin'ny taratasin'ny CPO ho an'ny sekreteran'ny filoha, iray amin'ireo antontan-taratasy izay nifantohan'ny hevitry ny Filan-kevitry ny Mpanjakavavy.
Nanonona ny minisitry ny fitsarana tamin'izany fotoana izany ny tatitra an-gazety tamin'ny 2014 fa: “Ny sekreteran'ny [Vaomiera Mpandinika ny Karama] (ny CPO) dia tsy mahazo manapa-kevitra momba ny tambin-karama amin'ny trano fonenana ho an'ny Filoha. Andraikitry ny SRC ihany izany. “
Tamin'ny taona 2014, nisy ny matoandahatsoratra an-gazety nitaky fanazavana. Nanontany ampahibemaso ny antony ara-pitsarana nanekena ny tambin-karama ho an'ny trano fonenana ny Ambony (SC) Martin Daly, ary nilaza ny fandraisan'ny filoha ny trano fonenam-panjakana sy ny tambin-karama miaraka ho “azo saziana ara-etika” ny filohan'ny asam-panjakana teo aloha, Reginald Dumas. Vao haingana kokoa, na izany aza, nangina ny parlemanta sy ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena – ankoatra ireo vitsy hafa - manoloana an'i Bharath, iray amin'ireo olona vitsy manohy manohitra ny raharaha.
Tamin'ny 15 Novambra 2016, na izany aza, nandefa taratasy tany amin'ny filoha ny vondrona mpikatroka Fixin’ T&T, mangataka aminy mba hamaly fanontaniana iray hafa napetrak'i Bharath tany am-boalohany, raha niasa tao amin'ny biraon'ny filoha ny rafozany (renin'ny vadiny). Raha nisy izany, nitaky ny fametraham-pialàn'ny filoha noho ny antony kiatranoantrano ny vondrona.
Niresaka tamin'i Dion Abdool ihany koa ny Global Voices, io Dion io dia filoha vao haingana napetraka tao amin'ny Ivon-toeran'ny Fangaraharana ao Trinidad sy Tobago (TTTI), sampan'ny Transparency International eo an-toerana an'ny fikambanana manerantany miady amin'ny kolikoly. Nilaza i Abdool fa tamin'ireo ahiahy noresahana momba ireo minisitera maromaro tamin'ny Tatitry Ny Mpanamari-bola Ankapobeny 2014/2015, nandray anjara tamin'ny tetikasa iarahana amin'ny biraon'ny AG, ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola ary ireo mpandray anjara hafa ny TTTI. Hampiseho tatitra ny komitin'ny mpitantana amin'ny 30 Martsa 2017, ary avy eo hizara ny zavatra hitany sy ny tolo-kevitra miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Mihevitra i Abdool fa ny haino aman-jery sosialy — miaraka amin'ny parlemanta sy ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny firenena — no sehatra sahaza hiresahana ny olana amin'ny tambin-karaman'ny trano fonenan'ny filoha ary nilaza fa manohy miandry ny valin-tenin'ny filoha izy. Tokony haseho ny porofo fanampiny, hoy izy, vonona haneho ny feony mikasika ny raharaha ny TTTI.